> Resource> Top List> Top 5 Free Android Ngwa
Smart ntị ike ịbụ ihe ọzọ na-akpali akpali na ụfọdụ ngwa. N'ezie, free ngwa na-ewere dị ka onyinye ndị kasị mma n'ihi na Abdroid Fans, ma ọ bụghị ihe niile free Android ngwa dị oké ọnụ ahịa àgwà. Ọfọn, ebe a bụ n'elu 5 free Android ngwa na uru gị ikpe. Enwe elu àgwà ngwa site n'ịṅa ihe ọ bụla.
1. Samsung Kies - free ngwa maka Android
Samsung Kies bụ otu nke kasị mma free ngwa maka Android ntị na mbadamba nke na-ahapụ ị nyefee photos, music na kọntaktị gị Samsung mobile na ekwentị gị Samsung ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa, na Anglịkan. The data nwere ike synced-ejighi eriri n'etiti gị abụọ Samsung igwe na mbadamba.
Jikwaa music na gị usoro na-enwe music n'agbanyeghị ebe ị bụ.
Nyefee foto na vidiyo na Samsung ekwentị na mbadamba.
Free ohere na gị Samsung mobile ngwaọrụ site na-ebufe data n'ime ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ndabere kalenda, oku na ndekọ, ndetu, kọntaktị na ndị ọzọ na gị Samsung ngwaọrụ
Cons: Ọ bụ adịghị n'ihi na ndị ọzọ Android ngwaọrụ.
2. MoboRobo - free Android ngwa
MoboRobo bụkwa a free Android ngwa nke na-akwado ma gam akporo igwe nakwa dị ka iOS ngwaọrụ. Site n'enyemaka nke a ngwa, ị nwere ike nyefee data, dị ka kọntaktị, music na photos, si gị Android ngwaọrụ gị iOS ngwaọrụ. Mobo Robo nwere wuru na-akụ download center si ebe ị nwere ike ibudata na akwụkwọ ahụ aja, ngwa ọdịnala, egwuregwu na ụdaolu.
Ndenye SMS eziga / anata site na PC na Desktọpụ
Wuru na-download akụ center
Nyefee data n'etiti iOS ngwaọrụ na gam akporo ngwaọrụ
Multi-media faịlụ management
Ofụri Esịt ọtọ App njikwa
Jikwaa gị ngwaọrụ site na nkasi obi nke gị na kọmputa
3. MyPhoneExplorer - Android ngwa maka free
MyPhoneExplorer, nke a free Android ngwa, na-ahapụ gị jikwaa gị Android ngwaọrụ mkpanaaka mfe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na enyemaka nke Bluetooth ma ọ bụ site USB na mgbe ahụ, ị pụrụ ịmalite ijikwa ya. Ụfọdụ n'ime antivirus software nwere ike ị kwụsị nbudata a ngwa ma nke a bụ n'ụzọ zuru okè na-adịghị njọ.
Portable ngwa ma welie arụmọrụ nke gị Android ekwentị.
Hazie Kalinda, Mkpu.
Eziga / enweta Ozi.
Ego / Jikwaa ebe nchekwa ọnọdụ nke Android ngwaọrụ.
Mmekọrịta PC na Android ngwaọrụ.
4. Mobogenie - free ngwa maka gam akporo igwe
Mobogenie - nke a na desktọọpụ Android ngwa na-enye gị na ihe owuwu nyefee gị data na kọmputa gị na ekwentị gị na ndị ọzọ na ụzọ gburugburu. Ị nwere ike ibudata ngwa ọdịnala na nanị otu click na-enwe ha maka free. Ị nwekwara ike jikwaa gị kọntaktị ekwentị site na PC gị keyboard ma dezie ha dị ka gị nhọrọ. Nke a bụ a kpokọtara software nke ga-edozi nza nke nsogbu unu na-ga-eme ka gị na nrọ-emezu.
Great SMS Manager
Nyefee nke data n'etiti ngwaọrụ
Jikwaa Media faịlụ
Ndabere nke data na weghachite mgbe chọrọ
Desktọpụ manịja igbe mbata gị
Mfe ekwentị gị ojiji
N'ihi na Android Fans, a Wondershare MobileGo for Android bụ ngọzi. Ị nwere ike tinye music na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla. Ị nwere ike na-ndabere gị data ma weghachi ya bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgbanwe ekwentị gị ma ọ furu efu ugbu a onye. Ị nwere ike hazie gị ngwa ọdịnala na gị gam akporo ngwaọrụ site na kọmputa gị.
Hazie gị ngwa.
Izipu Group akụkụ.
Jikwaa ekwentị oku site na kọmputa.
Get Online akụ n'otu ebe (Nani Windows version nwere).
Nyefee kọntaktị mfe ma dezie ha.
Jikwaa Android ntị na mbadamba na ma ọ bụ na-enweghị eriri USB.
Top 11 FaceTime Issues nchọpụta nsogbu Ha